သီတင်းကျွတ်ပိတ်ရက်မှာ ခရီးသွားဖို့ အစီအစဉ်မရှိသူတွေအတွက် To-do list
သီတင်းကျွတ်မှာ ခရီးမသွားဘူးဆိုရင် ဘာတွေလုပ်လို့ရမလဲ။
ဒီတစ်ခေါက် သီတင်းကျွတ် ရုံးပိတ်ရက်က (၅) ရက်ဆိုတော့ အားလုံးပျော်နေကြမယ် ထင်ပါတယ်။ ဒီလို ပိတ်ရက်ရှည်မှာ ခရီးသွားဖို့ အစီအစဉ်လည်း မရှိတဲ့သူတွေအတွက် သတင်းကျွတ်ပိတ်ရက်အတွင်း ပျော်ရမယ့် Budget To-do list လေးကို အကြံပြုပေးမယ်နော်!!!
မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ စေတနာ သဒ္ဒါတရားထက်သန်မှုကိုတော့ ဒီလို သီတင်းကျွတ် နိဗ္ဗာန်ဈေးတွေမှာ အပီအပြင်တွေ့ရမှာပါ။သီတင်းကျွတ်ပွဲတော်ရက်တွေတိုင်း နိဗ္ဗာန်ဈေး ရပ်ကွက်အလိုက် ဒါမှမဟုတ် လမ်းအလိုက်လုပ်ကြတာ အားလုံးသိပြီးသားပါ။ နိဗ္ဗာန်ဈေး တစ်ခါပတ်လိုက်ရင် တစ်နပ်စာမက နောက်တစ်ရက်စာပါ အဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်။ Budget ဆိုတဲ့အတိုင်း အိတ်ထဲက တစ်ပြားမှ စိုက်ထုတ်စရာမလိုပါဘူး။တစ်ယောက်တည်း နိဗ္ဗာန်ဈေးတိုးရမှာ ရှက်ရင် ဘော်ဒါတွေပါ ခေါ်သွားပါ။
သီတင်းကျွတ်ရက်မှာ ကိုယ့်ထက်ကြီးသူကို ကန်တော့ပြီး ရိုသေလေးစားမှု ပြသတာက မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ ဓလေ့ထုံးတမ်းပါ။ အဲဒီ ဓလေ့ထုံးတမ်းကို အသုံးချပြီး ကိုယ့်နဲ့ ဆွေမျိုးတော်စပ်တဲ့ လူကြီးမိဘတွေကို ကန်တော့ရင်း မုန့်ဖိုးတောင်းတတ်တဲ့ အလေ့အထပါ ပေါ်ပေါက်လာပါတယ်။ ဆိုလိုချင်တာကတော့ ဘုရားလည်းဖူးရင်း လိပ်ဥလည်းတူးရင်းဆိုသလို လူကြီးတွေကိုကန်တော့ရင်း မုန့်ဖိုးလည်းတောင်းရင်းပေါ့။
ကန်တော့ ပစ္စည်းမဝယ်နိုင်လည်း Budget အနေနဲ့ လက်အုပ်လေးချီ ကန်တော့ပြီး မုန့်ဖိုးတောင်းပါလို့ အကြံပြုလိုက်ပါတယ်နော်။
ရုံးဖွင့်ရက်မှာ အလုပ်တွေရှုပ်နေတာနဲ့ ရုပ်ရှင်ကြည့်ဖို့ အချိန်အလုံအလောက်မရခဲ့ဘူးဟုတ်! အခု ရုံးက (၅)ရက်တောင်ပိတ်ပြီဆိုတော့ ရုပ်ရှင်ကြည့်ရင်း အေးဆေးနှပ်ရုံပါပဲ။ Budget အဖြစ် ရုပ်ရှင်ကြည့်ရင်း စားဖို့ Snack တွေအတွက် နိဗ္ဗာန်ဈေးတိုးပြီး စုဆောင်းထားပါ။အိမ်တွင်းအောင်းမယ့်အတူတူ ရုံးပြန်တက်ရင် သူများထက် ပိုလှနေအောင် Skin Care ပါ လုပ်ဖို့ မမေ့နဲ့နော်။
မိသားစုနဲ့ ဒါမှမဟုတ် သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူ ပွဲဈေးလျှောက်ဖို့လည်း မမေ့ပါနဲ့လို့ သတိပေးစရာတောင် မလိုလောက်ပါဘူး။ ရန်ကုန်မှာ ဆိုရင်တော့ တစ်နှစ်မှ တစ်ခါ ဆင်နွှဲခွင့်ရတဲ့ ရေကျော်ပွဲဈေးတော်က နာမည်ကျော်ပါတယ်။သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ငယ်ငယ်တုန်းကလို လွတ်လွတ်လပ်လပ် ပွဲဈေးလျှောက်ရင်း ပျော်ပျော်ပါးပါး အချိန်တွေကို ကုန်ဆုံးပါ။ပွဲဈေးတိုင်းမှာ ရှိတတ်တဲ့ ရဟတ်စီးဖို့ စာရင်းထဲထည့်ထားပါ။
ကိုယ့်လိုပဲ ခရီးသွားဖို့ အစီအစဉ်မရှိတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အတူ အိမ်မှာ စုအိပ်ပါ။ Sleep Over လို့သာ ခေါင်းစဉ်တပ်ကြပေမယ့် တကယ်တော့ မအိပ်ကြတာ များပါတယ်။ ညမအိပ်ဘဲ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ စုပြီး သောင်းကျန်းရတာလောက် ပျော်ဖို့ကောင်းတာမရှိပါဘူး။မုန့်တွေလုပ်စားကြ၊ ဂိမ်းဆော့ကြ အတွေးနဲ့တင် ပျော်ဖို့ကောင်းနေပါပြီ။ကဲ…သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အတူတူ ညအိပ်ဖို့ကို အခုကတည်းက အစီအစဉ်ဆွဲထားလိုက်ပါ။
Duwun ရဲ့ စာဖတ်သူတွေမှာရော သီတင်းကျွတ်ပိတ်ရက်မှာ ဘာတွေလုပ်ဖို့ အစီအစဉ်ရှိထားပြီလဲ?